Olay ကအသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ Clay Face Mask Sticks!! | CosmeticMyanmar
Home » Article » Olay ကအသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ Clay Face Mask Sticks!!
Olay ကအသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ Clay Face Mask Sticks!!
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်။ ဒီနေ့မှာတော့ Olay ကအသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ Clay Face Mask Sticks လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဒီ Mask လေးရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ပုံမှန် Sheet အမျိုးအစားမဟုတ်ဘဲ Stick အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး Stick Mask လို့တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်နော်။ အသားအရေ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက် Glow Boost White Charcoal Clay Face Mask Stick, Pore Detox Black Charcoal Clay Face Mask Stick နဲ့ Fresh Reset Pink Mineral Complex Clay Face Mask Stick ဆိုပြီး သုံးမျိုး ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
Glow Boost White Charcoal Clay Face Mask Stick
White Charcoal နဲ့ Kaolin Clay တို့ကို အဓိကဖော်စပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အသားအရေရှိ ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ အသားအရေကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒီတော့ အသားအရေမညီမှာ မွဲခြောက်ပြီး စိုပြေမှုမရှိမှာကို ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
Premium Kaolin Clay နဲ့ Black Charcoal တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ချွေးပေါက်အတွင်းဆုံးပိုင်းအထိ သန့်ရှင်းစေပြီး ချွေးပေါက်များကို ကျဉ်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကြမ်းတမ်းပျက်စီးနေတဲ့အသားအရေကို ပြန်လည်နူးညံ့လာစေပါတယ်။ အဆီပြန်မှုကို လျော့နည်းစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် T-Zone မှာ အဆီပြန်တတ်တဲ့သူတွေ အဆီဖုရှိတဲ့သူတွေ အသုံးပြုရန် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
Fresh Reset Pink Mineral Complex Clay Face Mask
Premium Kaolin Clay နဲ့ Pink Mineral တို့ကို ပေါင်းစပ်ဖော်စပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ချွေးပေါက်အတွင်းပိတ်ဆို့နေတဲ့ ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး လန်းဆန်းတဲ့အသားအရေကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒါအပြင် Pink Mineral Complex က အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အသက် ၂၅ နှစ် ကျော်တဲ့ Beauties တို့ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်နော်။
Stick အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သုံးရလွယ်ကူပြီး လိုချင်တဲ့နေရာကို သီးသန့်ပိုင်းခြားအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Clay ပါဝင်ပေမဲ့လည်း အသုံးပြုပြီးနောက်မှာ အသားအရေကို ခြောက်သွေ့စေတာမျိုးမဖြစ်ပဲ အစိုဓာတ်ကို ဆက်လက်ထိန်းထားပေးနိုင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် 14 $ ကျသင့်ပြီး UK Direct တို့နဲ့ ချိတ်ဆက်မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Image Source: www.olay.com
SPF လည်း ပါ အစိုဓာတ်လည်း ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်မယ့် Superscreen Daily Moisturizer!!